Ku soo dejiso beta-ka dadweynaha ee Naqshadeeyaha Affinity hadda Windows | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeeyaha Affinity waa barnaamij nashqadeysan oo aan dhowr jeer ka soo hadalnay oo imanaya bedel weyn u ah Adobe Illustrator. Hore ayaan uga hadalnay waqtigaas sababaha qaar in la isku dayo lana tartamo barnaamijka muhiimka ah ee naqshadeynta garaafka. Naafada kaliya ee jirta ayaa ah inaysan ka jirin Windows-ka oo ay gaar u aheyd Apple iMac.
Laakiin tani way is bedeshay tan iyo maanta markay ahayd Affinity Designer beta beta ayaa la sii daayay ee Windows-ka si qofkasta uu u arko sababta barnaamijkan nashqadeynta ah u helay abaalmarino dhowr ah uuna ku guuleystey inuu u kiciyo bedel xiiso leh waxa uu yahay Sawiraha laftiisa. Barnaamij la bixiyo, laakiin inta lagu jiro wajiga beta dadweynaha, wuxuu ahaan doonaa mid bilaash ah qof walboo isku dayo.
Naqshadeeyaha Affinity ayaa helay Abaalmarinta Naqshadeynta ee 2015 loogu talagalay bilicsanaanta ay leedahay Apple waxayna leedahay wax walba oo aad ka filan karto barnaamijka naqshadeynta heer-xirfadeed. Waxa kaliya ee ay tahay inaad ogaato ayaa ah inaysan lahayn dhamaan astaamaheeda kama dambaysta ah ee nooca beta, inkasta oo aad fikrad aad u fiican ka heli doonto waxaad ka heli karto markay ku jirto noockeedii ugu dambeeyay ee Windows.
inta u dhaxaysa astaamaheeda qaarkood muhiim ah waxaan ka hadli karnaa:
Taariikh aan xadidneyn oo dib loogu celiyo
Noocyada la kaydiyay
Saameyn gaar ah
Ku dhoofi qaabab kala duwan: PNG, JPEG, GIF, TIFF, PSD, PDF, SVG, WMF iyo EPS
Kuwani waa qaar ka mid ah wanaaggiisa waaweyn, laakiin waxay leedahay wax badan oo dheeraad ah oo aan u baahanahay dhawr bog oo aan ku taxno. Naqshadeeyaha Affinity ayaa leh intaas oo dhan waa la sugi karaa naqshadeeye si uu u sameeyo shaqadooda naqshadeynta, markaa waxaan kugula talineynaa inaadan waqti dheeri ah qaadin iskuna day.
para galaan beta bulshada wax kale oo ay tahay inaad wax ka qabato xiriiriyahan inaad ku qorto magacaaga iyo emaylkaaga. Waxaad heli doontaa emayl leh xiriirka si aad u soo dejiso Naqshadeeyaha Affinity.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Naqshadeeyaha Affinity wuxuu ugu dambeyntii la yimaadaa Windows isagoo wata beta dadweynaha
maalin wanaagsan. ma beddelka Photoshop mise sawir-qaade ??? Waan fahansanahay inay ta dambe tahay, maadaama oo Photoshop uu yahay sawirka xiriirka. fadlan shakiga iga saar? Mahadsanid.
Ku jawaab alexander ruiz
Khalad weyn oo aniga ah. Waan wax ka beddelayaa gelitaanka, waa sida Sawirka, haa! Salaan!
Way ka sarreeysaa Sawirka illaa hadda. Waa dhakhso, qalabku wuxuu leeyahay sahlanaanta isticmaalka CorelDraw iyo isdhexgalka si heer sare ah u dhalaalaya, maaraynta maareynta xusuusta si fiican. Dhoofinta ayaa aad uga dareen badan muuqaalka muuqaalka muujiye. In ka badan intii lagu taliyay.
'The Floating Piers' ayaa kugu qaadi doonta socod lug ah oo ku saabsan biyaha balligaan Talyaaniga ah